Iinyani eziLusizi zoLonwabo | Martech Zone
Iinyani eziLusizi zoLonwabo
Lwesine, Okthobha 26, 2006 NgoMvulo, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Ndiyakholelwa ekubeni ndilawula ukonwaba kwam. Zininzi iimpembelelo zangaphandle (imali, umsebenzi, usapho, uThixo, njl. Njl.
Ngale ntsasa, ndibukele iindaba kwaye zityatyekwe noMadonna kwiOprah echaza ngokwamkelwa kwakhe umntwana ovela eAfrika. Eyona nto indibethileyo yinkcazo yabantu abaninzi yokuba le yayiyinto entle ukuba uMadonna ayenze eza kuzisa ulonwabo emntwaneni.
Ndikhe ndakhala malunga noku ngaphambili kwindawo yam, kodwa oku kuyintlekisa. Kutheni le nto uluntu lwethu lusoloko luphazamisa ubukrelekrele, italente kunye nolonwabo nobutyebi? Ke uMadonna uzokwenza umama ongcono kuba usisityebi? Mhlawumbi ikhaya leenkedama awayekulo inkwenkwe lalinabantu abamnandi ababemthanda kwaye bemkhathalela. Ngokuqinisekileyo, kodwa ndiqinisekile ukuba uyakuba nomgcini phantsi kweMadonna. Ke yintoni umahluko?
Imali izokonwabisa lomntana? Ingaba uqinisekile? Ngaba ukhe wabubona obunye bobomi babantwana beenkwenkwezi zerwala okanye abantu abazizityebi kakhulu? Uninzi lwazo lungena kwaye luphuma kwimo yesiqhelo kwaye luzabalaza ubomi babo bonke ukuba luzenzele igama. Ubutyebi buzisa iseti entsha yeengxaki ebomini (iingxaki endifuna ukuba nazo, nangona kunjalo). Kananjalo, uyafuna ukuba noMadonna njengoMama? Andiyi! Andikhathali nokuba unemali engakanani… Ndibone iMadonna kakhulu ebomini bam ukuba ndimhloniphe.
Mhlawumbi le yayi malunga nolonwabo lukaMadonna kunomntwana. Ngelishwa, kodwa ndiyaqikelela ukuba kunjalo. Andikholelwa ukuba umntwana ususwe kwinkcubeko yakhe, kwilizwe lakhe, usapho lwakhe lunethuba lokonwaba nge-jet-setting Rock Star njengoMama.
Inkwenkwe yayikwikhaya leenkedama ngenxa yokuba utata wayo wayengasenakukwazi ukumkhathalela. Asinakho ukucinga malunga nezinye iinkcubeko kunye neendlela zabo zokuba ngumzali. Abantu abaninzi baseMelika bangothuka kwezinye iinkcubeko kunye nokuba abantwana bakhathalelwa okanye baphathwa njani. Mhlawumbi le ndoda yayimthanda kakhulu unyana wayo kangangokuba wanikela ngomntwana wakhe kumntu onokumtyisa. Oko kungathatha isixa esimangalisayo sothando.
Ungathini ukuba, endaweni yokuthengela umntwana, uMadonna ebesele ebeka utyalo-mali lwexesha elide oluququzelela imfundo engcono, izixhobo kunye nomzi-mveliso kwingingqi awayeyityelele? Usenokuba nefuthe kulonwabo lwabantu abaninzi. Mhlawumbi umntwana amamkeleyo ngewayonwabe ngoluhlobo.
Ixesha liza kuxela.
API… Ngubani owakha iAPUI?
Okt 27, 2006 ngexesha 6:29 AM
UThixo ubangela ukuba zonke izinto zisebenzisane kunye kwabo bathanda uThixo kwaye babizelwe injongo yakhe… banokholo!
Okt 30, 2006 ngexesha 6:15 AM
Phuma http://gather.com/ Indawo yokunxibelelana nabantu ye-NPR isebenza namhlanje: "Ngaba ucinga ukuba uMadonna waphathwa ngokungenabulungisa ngamajelo eendaba kwimizamo yakhe yokwamkela umntwana?"